एनएमबि सुलभ इन्भेष्टमेन्ट फण्ड–१ को प्रतिएकाई खुद मूल्य १३.६७ | गृहपृष्ठ
Home लगानी एनएमबि सुलभ इन्भेष्टमेन्ट फण्ड–१ को प्रतिएकाई खुद मूल्य १३.६७
लगानी 25 views
एनएमबि सुलभ इन्भेष्टमेन्ट फण्ड–१ को प्रतिएकाई खुद मूल्य १३.६७
फागुन १५, काठमाडौं (अस) । एनएमबि म्युचुअल फण्ड अन्तर्गत सञ्चालित एनएमबि सुलभ इन्भेष्टमेण्ट फण्ड–१ को चालु आवको माघ मसान्तसम्ममा प्रतिएकाई खुद मूल्य रू. १३ दशमलव ६७ पुगेको छ ।
चालु आवको पौष मसान्तमा यो योजनाको प्रतिएकाई खुद मूल्य रू. १४ दशमलव शून्य १ रहेको थियो । माघ मसान्तसम्ममा यो योजनाको प्राप्त भइसकेको आम्दानी रू. २ करोड २६ लाख ९० हजार र प्राप्त भइ नसकेको नोक्सानी रू. ८ करोड ७४ लाख ९२ हजार रहेको छ ।
चालु आवको माघ मसान्तमा कुल व्यय रू. ३ करोड ५४ लाख ४७ हजार पुगेको छ । सोही अवधिमा बैङ्क मौज्दात रू. ३९ करोड ५३ लाख ५३ हजार रहेको छ भने माघ मसान्तसम्ममा धितोपत्र तथा अन्यमा गरी रू. ६३ करोड ४४ लाख ६४ हजार बराबरको लगानी गरेको छ ।
साथै, यस योजनाले १६ वाणिज्य बैङ्क, ९ विकास बैङ्क, १७ लघुवित्त वित्तिय संस्था, ३ होटल, १ हाइड्रोपावर कम्पनी, १२ इन्स्योरेन्स कम्पनी र २ अन्यमा गरि रू. ४५ करोड ३५ लाख २० हजार बराबरको सम्पति लगानी गरेको छ । योजनाको व्यवस्थापकमा एनएमबि क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ ।